Ezolimo zokongiwa kwemvelo, umkhuba omuhle kakhulu wokulwa nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - Interempresas.net
Ezolimo ngumsebenzi odingeka kakhulu kithina sonke. Ngenxa yakhe, singahlala sigcwele ubhasikidi wokudla. Kodwa-ke, ingenye yalabo abathumela ukukhishwa okukhulu emkhathini. I-Spain kuphela enesibopho se-15% yazo, okuyinto eningi uma sibheka ukuthi isilinganiso somhlaba simi ku-14%.
Amazinga okushisa ezweni azokwenyuka kancane kancane ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu, futhi lokhu kuzoba yinselelo eyandayo kubalimi, ikakhulukazi labo abasesifundeni iMedithera. Ukuguguleka kwenhlabathi, ukuntuleka kwemvula nokushisa isikhathi eside kungadala ukulahlekelwa okuningi. Ukugwema imiphumela ebabazekayo, kusetshenziswa imikhuba emisha, efana ezolimo zokongiwa kwemvelo.
1 Kuyini ezolimo zokongiwa kwemvelo?
2 Yikuphi okunenzuzo?
Kuyini ezolimo zokongiwa kwemvelo?
Lolu hlobo lomsebenzi luthakazelisa kakhulu, ngoba luzuzisa kakhulu kwezolimo uqobo nakwezemvelo. Ngakho-ke umkhuba ohlose ukonga, ukuthuthukisa nokwenza ukusetshenziswa kahle kwemithombo yemvelo ngokuphathwa okulawulwayo kwenhlabathi, amanzi, izinto eziphilayo kanye nokufakwa kwangaphandle.
Ngakho-ke, umlimi owamukela lo mkhuba lokho azokwenza konke okusemandleni ukunakekela nokuvikela umhlaba owusebenzelayo ngokushintshanisa izitshalo, usebenzisa umanyolo wamakhemikhali kuphela uma kunesidingo, futhi umboze inhlabathi ngotshani basendle bendabuko noma imfucumfucu yezitshalo ukuyivikela ekugugulekeni.
Ngakho konke lokhu, izinzuzo ezimbalwa ezibalulekile ziyatholakala, okulandelayo:
Ukunciphisa ukukhishwa kwesikhutha (CO2) ngokungasebenzisi imishini yezolimo izikhathi eziningi. ESpain, kuzosindiswa i-CO52,9 eyizigidi ezingama-2.
Ukuguguleka kwenhlabathi kugwenywa ngama-90% ngokocwaningo olwenziwe yi I-Spanish Association of Living Land Conservation Agriculture (AEAC.SV).
Ukwanda ngama-20% kokuthuthuka kwamandla kuqhathaniswa nokulima okuvamile, ifinyelela kuma-50% ngokuya ngohlobo lwesitshalo nendawo.
Ivumela yonga kufika kuma-24% kokuthengiswayo.
Ngakho-ke, izinhlangano ezivikela imvelo, njenge-Alianza por el Clima, Greenpeace, Fundación Renovables noma i-Amigos de la Tierra, zizibophezele kulo mkhuba ovumela ukukhiqiza ukudla ukuze iplanethi inakekelwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ezolimo zokongiwa kwemvelo, umkhuba omuhle kakhulu wokulwa nokuguquka kwesimo sezulu
Amazinga okushisa omhlaba wonke azokhuphuka ngaphezu kwama-degree amabili